एमालेको मेची–महाकाली अभियानमा उर्लंदो जनसागर - ebudhabar.com - Different taste of news, views & analysis.
एमालेको मेची–महाकाली अभियानमा उर्लंदो जनसागर
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) गत फागुन २१ गतेबाट सुरु गरेको मेची–महाकाली राष्ट्रिय अभियान गत शुक्रबारबाट फेरि सुरु भएको छ । सप्तरीको राजविराजमा गत फागुन २३ गते गरिएको षड्यन्त्रमूलक आक्रमणपछिको संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर तीन दिनका लागि स्थगन भएको उक्त अभियान शुक्रबार हेटौंडाबाट सुचारु हुँदा हजारौं जनताले सहभागिता जनाएका थिए ।
हेटौंडाको भुटनदेवी विद्यालय परिसरमा आयोजित सभामा मकवानपुरका साथै बारा, पर्सा, रौतहटलगायतका जिल्लाबाट जुलुससहित सहभागिता थियो । सभाका लागि ठाउँठाउँमा स्वागतद्वारा निर्माण गर्नुका साथै स्वागतमा तुल तथा ब्यानरहरूले सहर सजाइएको थियो ।
एमालेका नेता कार्यकर्ता देशका लागि मर्न तयार
सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीका पक्षमा देखिएको यो जनलहरबाट जनमत कसका पक्षमा छ भन्ने स्ष्ट भएको चर्चा गर्दै जनताको मनबाट एमालेलाई कसैले हटाउन नसक्ने बताए । अध्यक्ष ओलीले भने, ‘राजविराजमा हाम्रो सामूहिक हत्या गर्ने कोसिस गरियो । तर, देशका लागि मर्नुपरेमा नेकपा (एमाले) अक्ष्यक्ष र यसका नेताहरू तयार छन् । हामी म¥यौं भने नेतृत्व गर्न हाम्रा हजारौं नेताहरू तयार छन् । तर, ख्याल राखे हुन्छ, एमालेका नेता–कार्यकर्ताको हत्या गर्ने मधेसी मोर्चाका नीति महँगो पर्नेछ । नेकपा (एमाले) का नेता–कार्यकर्ताहरूलाई तराईमा मारेर राष्ट्रियता, निर्माण र एकताको अभियान समाप्त नहुने उल्लेख गर्दै ओलीले सत्ता गठबन्धनकै षड्यन्त्रबीच जनताको असाधारण सहभागिता देखिएको बताए । उनले भने, ‘भारत नेपालको छिमेकी हो, मित्र हो । तर, मित्रले मित्रवत् व्यवहार गर्नुपर्छ । अलिकति ठूलो भयो भन्दैमा नेपालका सिमाना मिच्ने, नेपाली भूमिभित्र पसेर नेपाली नागरिकमाथि गोली चलाउने, अनेक काममा अर्घेल्याइँ गर्ने अहंकारबाट भारत मुक्त हुनुपर्छ । नेपाली भूमिमा आएर भारतीय सुरक्षाकर्मीले नेपालीको हत्या गर्दा पनि केही गर्न नसकेर सरकारले लाचारी देखाएको छ ।’
राजविराजमा मोर्चाले जानाजान रक्तपात मच्चाएको ओलीको दाबी थियो । ‘प्रहरीमाथि आक्रमण गरेर त्यहाँका मानिसलाई मर्न बाध्य बनाएर लासमाथि राजनीति गर्न चाहेको छ । आफू घाइते भएर पनि सुरक्षा कायम गर्ने सुरक्षाकर्मीका अफिसरलाई काठमाडौं फिर्ता बोलाएबाटै सरकारको नियत छर्लङ्ग हुन्छ,’ ओलीले भने । कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव ईश्वर पोखरेलले कसैका धम्कीका सामु आफ्नो पार्टी नझुक्ने बताए । उनको भनाइ थियो, ‘जुन शक्तिले यो मुलुकमा संविधान बनाउनबाट रोक्न खोजेको थियो, त्यसैले आज कार्यान्वयन हुनबाट रोक्न खोजिरहेको छ । हामी यस्तो षड्यन्त्रलाई चिर्छौं र संविधान कार्यान्वयन गर्छौं ।’
नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष तथा प्रदेश नम्बर ३ का संयोजक अष्टलक्ष्मी शाक्यको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा सहभागीहरूलाई स्वागत केन्द्रीय सदस्य तथा मकवानपुर इन्चार्ज विरोध खतिवडा र सञ्चालन मकवानपुर जिल्ला अध्यक्ष मनु सिग्देलले गरेका थिए । नेपाली कांग्रेस, माओवादीलगायतका पार्टी परित्याग गरी नेकपा (एमाले) मा समाहित हुनेहरूलाई पार्टीका वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालले अबिर लगाएर स्वागत गरेका थिए ।
बूढो गोरु जोतेर अघि बढ्न सकिँदैन
शुक्रबार ३ नम्बर प्रदेशको हेटौंडाबाट सुरु भएको एमालेको मेची–महाकाली राष्ट्रिय अभियान नवलपरासीको कावासोती पुुगेर आज विश्राम लिएको थियो । त्यस दिनको पहिलो सभा चितवनको नारायणगढस्थित नारायणी नदी किनारामा सम्पन्न भएको थियो ।
सभालाई सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सिमानामा बसेर दादागिरी नदेखाउन चेतावनी दिए । ‘नेपाल सरकारले तत्काल भारत सरकारसँग केन्द्रीय तहमै कुरा गरेर गोलीकाण्डमा माफी माग्न लगाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘क्षतिपूर्ति भराउन पनि लगाउनुपर्छ ।’ नेपाली सिमानाभित्र आएर भारतीय सशस्त्र बलले गोली चलाएर नेपालीको हत्या गर्दा पनि सरकार लाचार भएको ओलीले बताए ।
‘यो सरकार नाम मात्रको सरकार हो, यसबाट भारतीय ज्यादतीविरुद्ध आवाज उठाउने हैसियत मैले देखेको छैन । हामीले सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ । घटनामा भारतलाई माफी मगाउन लगाउनैपर्छ ।’ भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मान्नुपर्नेसमेत ओलीले बताए । एमाले दुला पसेर ज्यान जोगाउने पार्टी नभएको भन्दै जनता, राष्ट्र र राष्ट्रियताका पक्षमा सधंै उभिने पार्टी भएको उनले बताए । ‘एमालेले स्वभिमानी राष्ट्रपे्रमी जनतालाई राष्ट्रको जिम्मा लगाउँछ । समृद्धि र राष्ट्रिय एकताको यो यात्रामा एमालेले विश्राम लिँदैन ।’
तीन नम्बर प्रदेश इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्यको अध्यक्षातामा सम्पन्न सभालाई वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेलगायतले सम्बोधन गरेका थिए । कार्यक्रकको सञ्चालन जिल्ला अध्यक्ष कृष्णभक्त पोखरेलले गरेका थिए । कार्यक्रममा पूर्वसांसद जागृहप्रसाद भेटवाललाई सम्मान गरिएको थियो ।
नारायणी नदी किनारपछि अभियान नवलपरासीको कावासोती पुगेको थियो । कावासोती सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले नेपाली कांग्रेस नेता तथा कर्यकर्तालाई देशको विकास र समृद्धिका लागि एमालेमा आउन आग्रह गरे । उनले भने, ‘नेपाली कांग्रेस अब बूढो गोरु भएको छ । बूढो गोरु जोतेर अब अघि बढ्न सकिँदैन । हिजो धेरै जोतियो, अब जोत्न सकिँदैन ।’ २५ वर्षअघिको नेता मदन भण्डारीको भनाइको स्मरण गर्दै ओलीले एमालेलाई अब कसैले रोक्न नसक्ने बताए । ‘२५ वर्षअघि मदनले सूर्य आयो आयो, कसैले छेक्न सक्दैन भन्नुभएको थियो । अब म भन्छु एमाले आयो आयो । कसैले छेक्न सक्दैन,’ उनले भने ।
एमाले निर्वाचनको पक्षमा रहेकाले निर्वाचन भाँड्न खोज्नेहरूको विपक्षमा रहेको बताए । उनले भने, ‘एमाले हिंसा, हत्या र आंतकको विरुद्ध छ । सरकारमा बसेर हिंसा, आतंक मच्चाउने क्रियाकलाप निन्दनीय छन् ।’ उनले राजविराजमा मोर्चाले शान्तिपूर्ण विरोध गरेको भनेर देश र दुनियाँलाई ढाँटेको बताए । उनले प्रश्न गरे, ‘भाला बोक्नु शान्तिपूर्ण कार्य हो ? बम आक्रमण गर्नु शान्तिपूर्ण कार्य हो ?’
अध्यक्ष ओलीले तराईमा जन्मेर हुर्केको एमाले तराईमा छैन भन्नु ढाँटको खेती गर्नु हो भन्दै अगाडि थपे, ‘एमाले तराईमा पाहुनाजस्तो आएको होइन । सभालाई एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवाली, स्थायी समिति सदस्य किरण गुरुङ, पोलिटब्युरो सदस्य नागेन्द्र चौधरी र एमाले केन्द्रीय सदस्य तिलक महतलगायतका नेताहरूले सम्बोधन गरेका थिए ।
सुन्ड–मुसुन्डहरूलाई जनताले तह लगाउनेछन्
मेची–महाकाली राष्ट्रिय अभियानअन्तर्गत आइतबार नवलपरासीको भूमहीमा भव्यतापूर्वक सभा सम्पन्न भएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गभन्दा एक किलोमिटर दक्षिणतर्फ रहेको क्याम्पस परिसरमा आयोजित सभामा त्यस आसपासबाट ठूलो संख्यामा जनसहभागिता रहेको थियो ।
शनिबार चितवनको नारायणगढमा पहिलो सभा सकेर नवलपुरको कावासोतीमा दोस्रो सभा गरेको केन्द्रीय टोली कावासोतीमा बास बसेको थियो । आइतबार बिहान कावासोतीबाट पश्चिम लाग्ने क्रममा त्यसबीचमा विभिन्न स्थानमा जम्मा भएका जनसमुदायले आ–आफ्नो घरका अगाडि पानी भरिएका घडा, तुल, ब्यानर र फूल राखेर स्वागत गर्नुका साथै ताली बजाएर ऐक्यबद्धता जनाएका थिए ।
सभालाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले अब हुने जुनसुकै निर्वाचनमा पनि आफ्नो पार्टीलाई कसैलाई हराउन नसक्ने अवस्था हालसम्मका सभाहरूबाट पुष्टि भइसकेको बताए । उनले भने, ‘मधेसमा एमाले बलियो भएका कारण हामीमाथि आक्रमण गर्न खोजिएको छ । यो पराजित मानसिकताका उपज हो । हामी यसको बदला निर्वाचनका माध्यमबाट लिन्छौं, जनताले यसको फैसला गर्नेछन् । मधेसी मोर्चाका नाममा अगाडि आएका सुन्ड–मुसुन्डहरूलाई जनताले तह लगाउनेछन् ।’ मुलुकको सार्वभौमिकता, स्वाभिमान, राष्ट्रियता र एकताका लागि नेकपा (एमाले) जुनसुकै बलिदान गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै खनालले भने, ‘त्यसमा एमाले कुनै सम्झौता गर्दैन । भारतीय हैकमका विरुद्ध हामी झुक्दैनौं । राजनतन्त्र हटायौं, माओवादी हिंसा समाप्त पा¥यौं, संविधानसभाबाट संविधान बनायौं । अबको हाम्रो ध्यान राष्ट्रिय समृद्धिमा हुनुपर्छ । नेकपा (एमाले) को ध्यान त्यसैमा छ ।’ सभामा बोल्दै नेकपा (एमाले) स्थायी समिति सदस्य तथा दुई नम्बर प्रदेश संगठन कमिटी संयोजक सत्यनारायण मण्डलले मधेसी दलहरू राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा उत्रिन नसकेपछि आपराधिक गतिविधिमा उत्रिएको बताए । उनले भने, ‘मधेसी दलका नेताहरूको पृष्ठभूमि हेर्नुभयो भने उनीहरू राजनीतिक छैनन् । मन्त्री भइसकेका नेताहरू अपहरण, बमबारीजस्ता घटनामा संलग्न हुनुले पनि उनीहरूले कस्तो राजनीति गरिरहेका छन् भन्ने देखिन्छ । मान्छे मारेर त्यसका आधारमा राजनीति गरेर उनीहरू सत्तामा पुग्न चाहन्छन् ।’ सिमानामा भारतीय आपराधिक तŒवहरूको उक्साहटमा एमालेमाथि आक्रमण गर्ने कोसिस भएको उल्ल्ेख गर्दै उनले आफूहरू त्यसबाट नडराउने बताए ।
स्थायी समिति सदस्य छविलाल विश्वकर्माले मुलुकका उत्पीडित वर्ग, समुदाय र वर्गका मानिसहरूको साझा पार्टी नेकपा (एमाले) भएका कारण त्यसले प्रत्येकपटक सरकारमा जाँदा उनीहरूका पक्षमा काम गरेको स्मरण गराए । उनले भने, ‘हामी राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउन चाहन्छौं, स्वाभिमान उँचो बनाउन चाहन्छौं ।’ कांग्रेस, माओवादीलगायतका पार्टी परित्याग गरी ठूलो संख्यामा पार्टी प्रवेश गर्नेहरूलाई पार्टी प्रवेश गर्नेंहरूलाई बरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाललगायतले स्वागत गरेका थिए । सहभागीहरूलाई नेकपा (एमाले) परासी जिल्ला संगठन कमिटीका संयोजक तुलसी पासीले स्वागत र जिल्ला कमिटी सदस्य विमला अर्यालले सञ्चालन गरेका थिए ।
सरकार अन्तैका प्रभु रिझाउन व्यस्त
आइतबार नै रूपन्देहीको भैरहवास्थित अञ्चलपुरमा मेची–महाकाली राष्ट्रिय अभियानको सभा भव्यतापूर्वक सम्पन्न भएको थियो । भैरहवा, बुटवल र आसपासका क्षेत्रबाट भेला भएका ५०औं हजार जनताका बीचमा पार्टी नेतृत्वले समसामयिक अवस्थामा पार्टीका धारणाहरू स्पष्ट पारेको थियो ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारलाई देशका जनतासँग कुनै मतलब नभएको, अन्तैका प्रभु रिझाउन व्यस्त रहेको बताए । ‘देशभक्त र विकासप्रेमी सरकार हटाएर बनेको यो सरकारले मुलुकका लागि कुनै काम गरेको छैन । मधेसका नाममा राजनीति गर्न चाहनेहरू त्यहाँका जनतालाई मराउन चाहन्छन् । त्यसरी मारिनेहरू हाम्रै भाइछोरा हुन्, तिनलाई विनाकारण मराइएको छ,’ उनले भने, ‘भारतीय सीमा सुरक्षा बल नेपाल पसेर नेपालीहरूमाथि गोली हान्दा सरकार चुइक्क बोलेको छैन, थर्कमान छ ।’ अध्यक्ष ओलीले भने, ‘नेपालभित्र आएर नेपालीमाथि गोली हानियो । यता, आफ्ना प्रहरीमाथि आक्रमण गर्नेहरूमाथि कारबाही गर्दा प्रहरी अधिकारीहरूमाथि नै कारबाही गरियो ।’ ओलीको प्रश्न थियो, ‘काम गर्ने हिम्मत छैन भने सरकारमा किन बस्ने ? यो देशलाई नोक्सान गर्न जडान गरिएको सरकारले देशको हित गर्न सक्दैन । जनताको यो उपस्थितिले देखाउँछ, सरकार हामी चलाउँछौं ।’ यो सरकार नेपाल र नेपालीको नभएको उल्लेख गर्दै ओलीले भने, ‘विधिवत् रूपमा त संसद्बाट बनाएजस्तो देखिन्छ । तर, चारतिर फर्केकाहरूलाई एउटै ठाउँमा ल्याएर टाउको जुधाएर मीत लगाउने काम अर्कैले गरिदिएको छ ।’ उनले अगाडि भने, ‘आगामी माघ ७ गतेसम्म तीनै तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने छ । तर, सरकारले अनावश्यक रूपमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्यायो । त्यसले सबभन्दा पहिला पाँच नम्बर प्रदेशलाई टोक्न खोज्यो, त्यसपछि बाँकीलाई पनि यसरी नै टोक्ने योजना छ । पाँच नम्बरका जनताले त्यसलाई अस्वीकार गरिदिएका छन् । मधेसी मोर्चाका नाममा दुई÷चारजना सडकमा उफ्रिए र ट्याउँट्याउँ गरे भने सरकारले देख्छ, तर तपाईंहरूको हजारौं, लाखौंको जुलुस देख्दैन । पहाडी र मधेसी भनेर झगडा गर्ने, जातजातका नाममा झगडा गराउने काम भइरहेको छ । यस्तो तमासा देखाउन खोजेको छ । हामी त्यो सफल हुन दिँदैनौं ।’
‘उहिले–उहिले रानीको जन्मदिनमा केटाकेटी जम्मा पारेर चकलेट बाँडिन्थ्यो । नागरिकता त्यसरी सीमामा अरू देशका मानिस जम्मा गरेर नागरिकता बाँड्न सकिन्न । १३ जना बुहारी नेपालको सांसद हुनुहुन्छ । एकजना बुहारी त मन्त्री हुनुहुन्छ । कांग्रेसको ठूलै नेता हुनुहुन्छ । ज्वाइँहरूको त कुरै नगरौं । मन्त्री हुन पाँच वर्ष पनि पुग्नुनपर्ने प्रस्ताव मानिन्न । नेपाली चेलीले भारतमा बिहा गरे सात वर्ष कुर्नुपर्छ, यहाँचाहिँ आएकै दिन नागरिकता पाइन्छ,’ ओलीले भने ।
सभालाई सम्बोधन गर्दै उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले वर्तमान सरकारले मुलुकलाई विभाजनतर्फ लैजान खोजे पनि त्यो कुनै हातमा पूरा नहुने बताए । उनले भने, ‘अहिले संविधान असफल पार्न खोजिएको छ । समयमा संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने योजना छ । ठीकै छ, त्यो सफल पनि होला । तर, यो देश असफल हुन सक्दैन, हुन दिइँदैन । संविधानको इतिहास साढे ६ दशकको छ, तर यो देशको इतिहास ४ हजार वर्षको छ ।’ सांसद आदित्यनारायण कसौधनको सभापतित्व र तुलसी चौधरीको सञ्चालनमा सम्पन्न सभामा पोलिटब्युरो सदस्य दलबहादुर राना, लोकतान्त्रिक मधेसी संगठनका अध्यक्ष रघुवीर महासेठले पनि बोलेका थिए । उक्त अवसरमा पूर्वसांसद रामचन्द्र भट्टराईलगायतका विभिन्न पार्टी परित्याग गरी एमाले प्रवेश गर्नेहरूलाई स्वागत गरिएको थियो ।
मधेशका गुण्डाले कार्यक्रम भाड्न खोजे
मेची–महाकाली राष्ट्रिय अभियानका सोमबार कपिलवस्तुको जीतपुरमा भव्य कार्यक्रम सम्पन्न भयो । अभियानको केन्द्रीय टोली जीतपुरस्थित सिद्धार्थ क्याम्पसको प्रांगडमा आइपुग्दा ठूलो समूहले स्वागत गरेको थियो ।
अघिल्लो दिन भैरहवाको कार्यक्रम सकेर बुटवल आइपुगेको टोली पश्चिमतिर बढ्दा बाटोमा आआफ्नो घर आँगनबाट जनताले स्वागत गरेका थिए । बेलबास, तामनगर, नयाँ गाउँ, मुर्गिया, रामापुर, बाँसगडढी, सालझण्डी, पिपरा, बैरिया, चार नम्बर लगायतका ठाउँमा होली मनाउँदै टोलीलाई साथ दिन जनता सडकमा निस्किएका थिए ।
रामापुरस्थित शहीद नारायण पोखरेल क्याम्पसको प्रांगडमा अभियानको टोलीलाई सामूहिक खानाको व्यवस्था गरिएको थियो । त्यहीँ आपसमा नेता–कार्यकर्ताले आपसमा होली मनाएका थिए । सोही स्थानमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले आगामी निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) पहिलो पार्टीका रुपमा स्थापित हुने निश्चित भएका कारण त्यही त्रासबाट केही मुठ्ठीभरका तत्वले मधेसमा एमालेको कार्यक्रम भाँड्ने कोसिस गरेको बताए र उनले भने–‘तर त्यसबाट हाम्रो पार्टी विचलित हुँदैन, बरु त्यसलाई ऊर्जाका रुपमा त्यसलाई लिनेछ ।’
जीतपुरमा त्यस क्षेत्रमा आयोजित अहिलेसम्मकै सबभन्दा विशाल सभामा बोल्दै महासचिव ईश्वर पोखरेलले एमालेले अगुवाइ गरेर पनि मेची–महाकाली अभियान सिंगो राष्ट्रको अभियान भएकाले आमजनताले उत्साहजनक सहभागिता जनाएको बताए । केन्द्रीय कमिटीका सचिव गोकर्ण विष्टले राष्ट्रिय एकता, सद्भाव र समृद्धिका पक्षमा रहेका कारण सबै जातजाति, भाषा र संस्कृतिका जनतालाई जोड्ने पुलका रुपमा रहेको चर्चा गरे । उनले भने, ‘संविधान कार्यान्वयन हुन नदिएर नेपाललाई गरिब, अभावग्रस्त र पछ्यौटे राखिरहने कोसिस भइरहेको छ र केही शक्तिहरु त्यसका लागि सक्रियतापूर्वक लागिरहेका छन् । पहाड र तराई छुट्याएर मुलुकलाई कमजोर बनाउने सरकारको अभियानलाई एमालेले स्वीकार गर्दैन, कर्णाली र महाकाली नदी सुक्न सक्छन्, तर एमालेले मान्दैन ।’ उनले अब सुखी र समृद्ध जनताको मुलुक बनाउने संकल्पका साथ आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद लालबाबु यादवले एमालेलाई मधेसविरोधी भनेर आरोप लगाउनेहरुले इतिहासको अध्ययन नै नगरेको बताए । एमाले सरकारमा जानुभन्दा पहिला ४६ जना मधेसीहरुको मृत्यु भएको स्मरण गराउँदै एमालेले सरकारको नेतृत्व गरेपछि मधेस आन्दोलन सकिएको, नाकाबन्दी खुलेको, पीडितलाई राहत दिएको, मधेसलाई बजेटको व्यवस्था गरेको बताए । नेकपा (एमाले) कपिलवस्तुका अध्यक्ष झविलाल पोखरेलको अध्यक्षता र सांसद विश्रामप्रसाद चौधरीको सञ्चालनमा सभा सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रममा कांग्रेस, माओवादी पार्टी छाडेर एमाले प्रवेश गरेकाहरुलाई स्वागत गरिएको थियो ।
राष्ट्रलाइ एकताको सुत्रमा बाँध्न अभियान
मेची–महाकाली राष्ट्रिय अभियानका क्रममा सोमबार नै दोस्रो सभा दाङको लमहीमा विशाल जनसमुदायका बीचमा सम्पन्न भएको थियो । कपिलवस्तुको जीतपुरमा भव्य कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि केन्द्रीय टोली दाङतर्फ प्रस्थान गर्दा चन्द्रौटामा स्थानीय बासिन्दाले अविरसहित भव्य स्वागत गरेका थिए । दाङबाट आएको टोलीले धानखोलामा केन्द्रीय टोलीलाई स्वागत गर्नुका साथै जुलुशसहित लमही पुर्याएको थियो ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राष्ट्रिय अभियान आयोजना गरेर आफ्नो पार्टीले राष्ट्रलाई एकताको सूत्रमा बाँध्न चाहेको उल्लेख गरे । बरिष्ठ नेता नेपालले भनेः‘ कुनै ठाउँमा कुनै दललाई आउन दिन्न भन्छ भने त्यो निहुँ खोजेको मात्र हुन्छ । जसरी दाङमा आउनबाट हामीलाई कसैले रोक्न सक्दैन, त्यसैगरी मुुलुकका अरु भूभागमा जानबाट पनि कसैले रोक्न सक्दैन । अहिलेका ७ सय ४४ वटै स्थानीय तहमा एमाले छ, जताजतै छ । संविधानले नै राजनीति दलहरुलाई सभा आयोजना गर्ने, जुलुश गर्ने अधिकार दिएको छ । तर, आफूलाई यही देशका नेता ठान्नेहरुले हामीलाई सप्तरी जानबाट रोके । यसबाट उनीहरुको नियत स्पष्ट भएको छ । आफूलाई प्रजातन्त्रको ठेकेदार ठा्रन्नेहरुले नै यस्तो गरेको देख्दा अचम्म लागेको छ ।’
राजविराजमा एमालेकोे सभामा उपस्थित नेताहरुलाई एउटै चिहान बनाउने षड्यन्त्र भएको उल्लेख गर्दै नेता नेपालले भने–‘हामी जनतामा जाँदा उल्टै जनता भड्काउने काम भएको आरोप लगाइएको छ । यसलाई हामी अस्वीकार गर्छौं ।’ संविधानका बारेमा फिँजाइएका भ्रमहरुलाई चिर्नका लागि कार्यक्रम सुरु गरेको उल्लेख गर्दै नेपालले भने–‘मेचीबाट सुरु गर्दा जुन उत्साह देखा परेको थियो, अहिलेसम्म पनि कायम छ । सप्तरीमा हतियार लिएर हामीमाथि आक्रमण गर्न खोजियो । प्रहरीमाथि आक्रमण गरियो, एमालेका नेताहरुमाथि बमले आक्रमण गर्ने कोसिस गरेका थिए । त्यस्तलाई रोक्ने प्रहरी र प्रशासनका अधिकारीहरुलाई फिर्ता बोलाएर सरकारले मानमर्दन गरिएको छ, मनोबल गिराउने काम गरिएको छ । हामीलाई शंका छ, यस्ता घटनामा कतै सरकारका मानिसहरु त संलग्न छैनन् ? नत्र कार्यक्रमअघि नै दुई चार सय मानिसलाई समाउन सकिन्थ्यो, बमसहित मान्छे पक्राउ गरेर राख्न सकिन्थ्यो । हामीले तीन दिन कार्यक्रम रोक्दा पनि अपराधीहरु खोज्ने काम भएन ।’
पार्टी उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले इतिहासदेखि नै स्वतन्त्र रहेको मुलुकलाई कसैले केही गर्न नसक्ने र त्यसका लागि जनता सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै त्यसैका लागि आफ्नो पार्टी सक्रिय भएको बताए । उनको भनाइ थियो, ‘आज केही सीप नलागेपछि जात, धर्म, क्षेत्र आदिका नाममा नेपाललाई कमजोर बनाउन खोजिएको छ । हामीबीचको एकता नै हाम्रो मुलुकको आधार हो । खबरदार, कुनै पनि तत्वले नेपाली जनतालाई विभाजित गर्न सक्दैन, चकनाचुर पार्छौं, असफल पार्छौं ।’ माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र केपी ओली नेतृत्वका सरकारहरुले उदाहरणीय काम गरेकाले जनताले त्यसको सही मूल्यांकन गर्ने अपेक्षा पनि उनल ेव्यक्त गरे ।
सभामा बोल्दै पार्टी स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेलले लोकप्रिय काम गर्दागर्दै ०५२ सालमा मनमोहन अधिकारीको सरकारलाई हटाइएको बदला जनताले त्यसपछि सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा एमालेलाई बहुमत स्थानमा जिताएर लिएको स्मरण गर्दै यसपटक पनि राम्रो काम गर्दागर्दै केपी नेतृत्वको सरकारलाई हटाइएकाले स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीले दुई तिहाई बहुमत ल्याउने बताए । कार्यक्रम केन्द्रीय कमिटीका बैकल्पिक सदस्य तथा पूर्वसभासद् शान्ता चौधरीको अध्यक्षता र बैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य तथा दाङ जिल्ला इन्चार्ज मेटमणि चौधरीको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो ।
कार्यक्रममा लोकप्रिय कलाकार बद्री पंगेनी ‘आयो आयो एमाले आयो, कालो बादल फाटेर घाम लायो’ गीत गाएका थिए । उपस्थित जनसमूहले नाचेर साथ दिएको थियो ।
के हुन्छ राष्ट्रिय सभा सदस्यको शपथ ?
चन्द्रागिरिको ढुंगामा क–कसले गर्दै छन् गोलमाल ?
मेगा बैंकको मुनाफा बढ्यो
मौका छोपेर कर्मचारीलाई स्थायी
न्यायाधीशः दाइ कि कमरेड ?
लालीगुराँसको १८औं साधारण सभा सम्पन्न